Xeer-ilaaliyaha guud oo sheegay in ay si xun ula dagaallameen musuq-maasuqa. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Xeer-ilaaliyaha guud oo sheegay in ay si xun ula dagaallameen musuq-maasuqa.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka Soomaaliya Dr. Sulaymaan Maxamed Maxamuud, ayaa sheegay in xukuumaddii dhacday ee ra’iisal wasaare Xasan Cali Khayre ay xoog ula dagaallantay masuq-maasuqii ka jiray waddanka oo wakhtigii hore gaadhay halkii ugu sarraysay.
Isaga oo hadal kajeedinaya kulan uu laqaatay bahda caddaaladda dalka, ayaa Xeer-ilaalliyahu waxa uu sheegay in hay’adaha caddaaladda iyo garsoorku ay yihiin kuwa la rabo inay ku dadaalan cadaaladda, isla markaana la dagaallamaan Musuq maasuq dalka halakeeyay.
Dr. Sulaymaan Maxamed, ayaa tilmaamay inaysan sax ahayn in dalkaSoomaaliya uu sannad kasta kaalinta koobaad uga jirto waddamada ugu musuqa badan aduunka. Waxa kale oo uu sheegay in bahda caddaalddu ay sameeyeen dagaalkii ugu adkaa ee ka dhan ah musuq maasuq iyo is daba marinta.
“ Sax ma ahan maalin kasta in aan liiska hore ku jirno muqus-maasuq darteed, waa inaan hufnaan la nimaanaa cidda la rabo inay ka shaqaysana waa bahda Cadaaladda”, ayuu yrii Xeer-laalliyuhu.
Dhowaan, maxkamada gobolka Banaadir ayaa xabsiyo dhaadheer ku xukuntay masuuliyiin katirsan hay’adaha dowladda oo lagu helay inay musuq maasuq iyo is daba marin ku sameeyeen hantida dadweynaha.
2- arrin,oo gebolka Gedo uu caqabada ugu noqday furitaanka shirka Muqdisho .
4-dalka oo Afrikaan ah oo shiinuhu doonayo in Saldhigyo Millateri uu ka samaysto
SAWIRRO: Ra’iisal wasaare Kheyre oo si diiran loogu soo dhoweeyay Magaalada Riyaad ee Boqortooyada Sacuudiga
Midowga Musharrixiinta oo Jimcaha qabanaya banaanbax kale